Digital Patrika – १२ बुँदे सम्झौता यता पटक पटक एजेण्डा हारेको कारण काँग्रेसको यो हविगत
१२ बुँदे सम्झौता यता पटक पटक एजेण्डा हारेको कारण काँग्रेसको यो हविगत
Dec 12, 2017digitalpatrikaअन्तर्वार्ता0
देवप्रकाश त्रिपाठी, पत्रकार तथा विश्लेषक
पछिल्ला मत परिणामहरुले काँग्रेसको कमजोर अवस्था र वामपन्थी शक्तिहरुको सहज जीत के कारण भयो ?
पछिल्लो मत परिणाम आउँनुको पछाडि केही ऐतिहासिक, वैचारिक, व्यवहारिक र सांगठानिक कारणहरु छन् । नेपाली काँग्रेसको पराजय अहिले भएको होइन, जुनदिन उसले माओवादीसंग १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा ग¥यो, पराजयको प्रारम्भिक यात्रा सुरु भयो । किनभने ०६३ सालको परिवर्तनपछि उसले नेपाली काँग्रेस जनाउने सबै अगंहरु, बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र, समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम, संवैधानिक राजतन्त्रमा अडानलाई स्थापित गर्न सकेन ।
त्यस्तै, पछिल्लो दशकमा काँग्रेसका आफ्ना एजेण्डा भन्दा पनि कम्युनिस्टहरुको एजेन्डामा चलेको देखियो । काँग्रेस विभिन्न कुराहरुमा विवादास्पद अवस्थामा आयो । काग्रेसको नेतृत्वले आइजीपी नियुक्तिमा, राजदुत नियुक्ति, मिडियामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सुभापतिको गैर जिम्मेवार प्रस्तुति र आम नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । साथै चुनावी कार्यक्रम र योजनाहरु पनि स्पष्ट देखिएनन् । लोकतान्त्रिक पक्षधरको तरंग खासै देखिएन । यस्ता कुराहरुले कांग्रेसको पराजय पहिले नै निश्चित भएको थियो । त्यसको विपरित सत्ता बाहिर बसेर राष्ट्रियतामा वाम गठवन्धनले आमनागरिकको साथ दियो ।
वाम गठवन्धनमा पछिल्लो समय आएको यो तरङ्गलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
देशमा विभिन्न संकटहरुको बेलामा विषेशगरि नेकपा एमालेका अध्यक्षले स्पष्टरुपमा राष्ट्रियता सहित जनताका माझमा उभिए । नेकपा एमालेको सागंठनिक संरचना बलियो, चुनावी कौशलता र रणनीति राम्रो थियो । त्यसको विपरित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र कार्यक्रम असफल भयो ।
वाम गठवन्धनमा समर्थन गर्ने सबै घटकमा नीति, कार्यक्रम र विचार थियो भने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक गठवन्धनमा स्पष्ट रुपमा एउटै नीति, कार्यक्रम र विचार भएन त्यसै कारणले झापाबाट सिटौला पनि त पराजित भए ।
वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नयाँ शक्ति नेपाल र विवेकशिल साझालाई पनि त सम्मानजनक मत दिए मतदाताले यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
नयाँ शक्ति नेपालबाट गोरखाबाट निर्वाचित बावुराम जीलाई पनि मतदाताले जिताए तर अघिल्लो पटकको जस्तो मतान्तर हेर्दा यो संन्तोजनक देखिदैंन । त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ मा विवेकशिल साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रले पुराना नेताले गरेनन् हामीले गछौँ भनेर आउनु भयो तर सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस अघिदेखि नै बलियो पनि हो । मिश्रले पाएको मतलाई हेर्दा यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस धेरै हदमा सच्चिनु पर्ने सन्देश जान्छ ।
पछिल्लो समय तपाईले विभिन्न व्यक्तिहरुले चुवान जित्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो ? यो व्यक्ति प्रतिको आरोप हो कि प्रवृत्ति ?
यहाँ व्यक्ति र प्रवृती दुवै छन् । चितवनमा प्रचण्डलाई पराजित गर्नुपर्ने कारण के भने सत्ताका लागि नै उहाँले त्रास, हिंसा, क्रान्ति गर्नु भयो त्यहि बेलामा नै उहाँले अवसर पाउनु भएको थियो चुनावमा आएर जनताको मन जितेको भए देशमा यति ठुलो नोक्सान हुन्थेन । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता कमजोर हुन्थेन । राजनीतिक नेतृत्वमा स्वाभावि रुपमा उदय हुनुपर्दछ तर आरजु राणा विल्कुल नातावाद, कृत्रिम पात्रको रुपमा सत्ताको आडमा ऐजेरु पलाए जस्तो हुनु हुँदैन । अनि नेम्वाङ जी सभामुख भएर बडो शालिन रुपमा आफ्नै एजेण्डामा ८५% नागरिकको अपेक्षलाई निराश गराउनु भयो र धर्म निरपेक्ष देश बनाउँन सफल हुनु भयो । मैले व्यक्ति होइन प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । गलत प्रवृत्तिका मानिसहरु आउँनु हुँदैन भनेको हो र यी त केही प्रतिनिधि मुलक त्यस्तै पात्र मात्रै हुन् ।
निर्वाचन पछाडिको राजनीतिक एजेण्डा के हुन्छ ? के अब अधिनायकवाद नै आउछ जस्तो देख्नु हुन्छ ?
कम्युनिष्टहरु लामो रणनीतिकार हुन्छन् । उनीहरु उपयोग र प्रयोगको नीति लिएर राजनीतिक एजेण्डालाई अगाडि बढाउछन् । २०६३ देखिको राजनीतिक एजेण्डा कम्युनिष्टहरुको हो । अब नेपाली कांग्रेस पनि रक्षात्मक रुपमा सशक्त प्रतिपक्ष भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । वाम एकता बलियो भयो भने अधिनायकवादको आउँछ । अब हरेक नागरिकले सुरक्षा र अवसर पाउन उनिहरुको समर्थन, सहयोग र सिफरिसको अनिर्वाय आवश्यक पर्छ । कुनै निकाय स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । हरेक तहमा पार्टीको निर्णय चाहिन्छ । राज्य सत्ताको उपयोग गरि समयमा निर्वाचन गर्ने, विधि र कानुनी शासनमा चल्ने चुनाव आफैं जित्ने हो भने यो अवस्थामा अधिनायकवाद बडो शालिन रुपमा आउँछ ।
यसरी चल्दा वाम गठवन्धनलाई कुनै चुनौती हुँदैन त ?
चुनौती अवश्य पनि छ लोकतान्त्रिक धारको मतलाई उपेक्षा गरेर वाम गठवन्धन आफ्ना एजेण्डामा मात्र अगाडि बढ्दा फेरि नेपाली कांग्रेस कमजोर छैन भन्ने देखाउँछ । त्यो भन्दा पनि ठूलो चुनौती आफूहरु नै कसरी चल्नु हुन्छ पार्टी, सत्ता र एजेण्डाहरुलाई स्थिरता र विकासलाई कसरी अगाडि लैजानु हुन्छ त्यसमा भर पर्दछ । अधिकार विकेन्दी्रकरणमा स्थानिय तह, प्रदेशको संरचना र केन्द्रलाई मिलाउन पनि अर्को चुनौती छ ।
अवको सरकारले के गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । नेपाली कांग्रेसको अवको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?
२०६३ देखि राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र सामाजिक सद्भाव कमजोर भएको छ त्यसलाई बलियो बनाउनु, आर्थिक विकासका लागि लगानी मैत्री र स्थीर सरकारले चुस्त सेवा र सुविधाले जनमतको कदर गर्नु पर्दछ । भने नेपाली कांग्रेसले पहिलो नेतृत्व परिर्वतन गर्नु पर्दछ । आफ्ना अवका एजेण्डाहरु स्थापित गर्नुपर्दछ जनताको माझमा जानु पर्दछ । आफ्ना कमजोरीलाई सच्चाउँदै प्रतिपक्षको सहि र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।